ရွှေရောင်မှတ်တမ်း: * စာဖတ်ခြင်းဖြင့် အသိမမြင်ကျယ်ပါစေ *
သူငယ်ချင်းတို့ရေ မင်္ဂလာပါ... နှင်းပွင့်လေးရဲ့ ခံစားချက်လေးတွေ ပေါင်းစုပြီးရေးထားတာပါ
* စာဖတ်ခြင်းဖြင့် အသိမမြင်ကျယ်ပါစေ *
* * * ပြတင်းပေါက်ကို ဖွင့်ထားပါ ............ * * *
စာမတတ်သူက ပြတင်းပေါက်မပါတဲ့ အိမ်နဲ့တူတယ်တဲ့။ အလင်းမ၀င်၊ လေကောင်းမရ။ စာတတ်ပြီး စာမဖတ်သူက ပြတင်းပေါက်ပါပြီး ပြင်တင်းပေါက်မဖွင့်ဘဲ ပိတ်ထားတဲ့အိမ်နဲ့ တူတယ်တဲ့။ အလင်းမ၀င် လေကောင်းမရတာ အတူတူပါပဲ။
စာလဲတတ် စာလဲဖတ်သူကတော့ ပြတင်းပေါက်ရှိပြီး ပြတင်းပေါက်ကို ဖွင့်ထားတဲ့အိမ်မှာ အလင်းရောင်နဲ့ လေကောင်းရသလို အသိအမြင်ပညာ လင်းရတယ်။ စာနည်းနည်းဖတ်ရင် အသိအမြင် နည်းနည်းကျယ်တယ်။ စာအများကြီးဖတ်ရင် အသိအမြင် အများကြီးကျယ်တယ်။
* * အခွင့်သာတိုင်း စာဖတ်ပါ...... * *
တိုးတတ်တဲ့လူတွေက အချိန်ကိုအကျိုးမဲ့ အကုန်မခံဘူး။ ရထားစောင့်ရင်း၊ ကားစောင့်ရင်း စာဖတ်တယ်။ သင်္ဘောစီးရင်း စာဖတ်တယ်။ အစည်းအဝေးမစသေးရင် စာဖတ်တယ်။ သွားလေရာလက်ဆွဲအိတ်ထဲမှာ စာအုပ်၊ စာစောင်ပါတယ်။ အခွင့်သင့်တာနဲ့ စာဖတ်တယ်။ သွားရင်လာရင်း၊ နေရင်းထိုင်ရင်း အသိပညာတိုးနေတယ်။ တော်သူတွေ တော်သည်ထက်တော်အောင် ကြိုးစားနေကြတယ်။
* * စာဖတ်ခြင်းဖြင့် မြှုင့်တင်ပါ . . .. .. . * *
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်နိုင်ငံ၊ ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် ရွာသိမ်ရွာငယ်လေးရဲ့ အစွန်အဖျား တဲအိမ်လေးမှာ ဖြစ်ပါစေ စာအများကြီး ဖတ်ရင် နောက်ကျမကျန်ဖူး။ ကမ္ဘာနဲ့အညီ ခေတ်မီတိုးတတ်နေပါလိမ့်မယ်။ စာဖတ်ခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ့်ကို မြှင့်တင်ပါ။
* * စာများများဖတ်ပါ......... * *
စာဖတ်တာကို အကျင့်ပါနေအောင်လုပ်ပါ။ အခွင့်သာတိုင်း စာဖတ်ပါ။ စာအများကြီးဖတ်ပြီး ပညာကြီးမြင့်ပါစေ။ လူတော်လူကောင်းဖြစ်ပြီ ဘ၀အောင်မြင်တိုးတတ်ပါစေ။
Posted by နှင်းပွင့်လေး at 11/01/2009
***** ကဗျာ *****
***** ဒွိဟ *******
ချစ်သူ အတွက် 8
ချစ်သူ အတွက် 7
ချစ်သူ အတွက် 6
******** အပြန်အလှန်-ပေးစာ(သားနဲ့မိဘ) *****
***** နဖူးစာ ဆိုတာ ဘာလဲ..****
* * နှိမ့်ချပါ။ မနိမ့်ကျစေနဲ့ * *
* *လုပ်သင့်တဲ့ အလုပ်နဲ့ မလုပ်သင်တဲ့ အုလပ် * *
* * * မဲ့ကာ ရွဲကာမပြောနဲ့ * * *
* * နှလုံးသားကို အလှပြင်ပါ * *
* ဥပဓိရုပ်တင့်ပါစေ *
* စိတ်ကောင်းရှိပါ *
* * ဟာသအတွေးလေးများ * *
* * ချစ်သူ့နှင်းဆီ * *
** ** အချစ် * * *
* * အိမ်ထောင်ရေး တိုးကိန်းသီအိုရီ * **
ငါ့ကို ဘယ်အချိန်ထိ ချစ်မှာလဲ!
** ကော်ဖီနဲ့တူတဲ့ အချစ် ***
* အသင့်တော်ဆုံးချစ်သူ *
* အချစ်ဆုံးကို နားလည်ပါ *
* လွှင့်ပါးခဲ့တဲ့အချစ် *
* * ဥပေက္ခာအချစ် * *
* * ပဲ့ကြွေသွားတဲ့ အချစ် * *
* * တစ်ယောက်ထဲ * *
* * ရက်ရက်စက်စက် ထားခဲ့ပါ * *
* * ဖူးစာရေး နတ်မင်းသို့တောင်းခံလွှာ * *
* * သံယောဇဉ် * *
ချစ်သူအတွက် ရေးတဲ့စာ (10)
တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော စကားများ (1) (1)
တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော စကားများ (3) (1)
တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော စကားများ (2) (1)
ရာသီဖွားတွေရဲ့ အချစ် (1)
နှင်းပွင့်လေးသိပ်ကြိုက်တဲ့ သီချင်းစာသာလေးတွေ (5)
** သူငယ်ချင်းများ ** ခံစားချက်ကဗျာအိမ် ရွှေညာသူလေး အိမ်မက်လမင်း စကုသားလေး ကိုအယ်ကိုရဲ့ နောင်အင်းလေး ကိုတိုးလေး မြူးကလေးရဲ့ အလွမ်းအိမ် ကိုတိုးလေး
သူငယ်ချင်းတို့ရေ မင်္ဂလာပါ ....။ နှင်းပွင့်လေးရေးသော ပို့စ်တွေကို လာရောက်ဖတ်ရှုပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို နှင်းပွင့်လေးက အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးကို နှင်းပွင့်လေး ခင်ပါတယ်။
Copyright 2009 ရွှေရောင်မှတ်တမ်း. Powered by Blogger